फेरिदै छिल्लीकोट | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / फेरिदै छिल्लीकोट
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार, स्लाइड April 18, 2019	0 80 Views
छिल्लीकोट। दाङकै दुुर्गम पहाडी क्षेत्र मानिने तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ ऐतिहासिक पर्यापर्यटकीय क्षेत्र हो– छिल्लीकोट। जुन बाइसे÷चौबिसे राज्यको एक राजदरबार भएको स्थान पनि हो। प्राचीनकालमा सत्यदेवीको अंग पतन भई मालिका कालिका भगवतीको उत्पत्ति भएको भन्ने धार्मिक किंबदन्ती पनि छ।
केही समय अघिसम्म छिल्लीकोट घुम्न र पूजापाठ गर्न जाने पर्यटक र दर्शनार्थीहरु करीव ३ घण्टा जंगलको बाटो हि“डेर जानुुपथ्र्याे। अहिले मोटरबाटो खुुलेपछि पर्यटक र दर्शनार्थी मात्रै होइन स्थानीयहरुलाई ठूलो राहत मिलेको छ। छिल्लीकोटमा मोटर बाटो पुुग्दा गाउ“कै मुहार फेरिएको स्थानीय परवीर पुनले बताउनुुभयो। उहा“ले भन्नुुभयो– ‘कम्ति दुख थिएन बाटोको, अहिले बल्ल आयो। जसले धेरै ठूलो राहत मिलेको छ।’
सडक अभावका कारण जंगलको बीचमै थुनिएको रमणीय ऐतिहासिक छिल्लीकोट गाउ“ सडक विस्तारस“गै धेरै फेरिएको छ। देवीको दर्शन गर्ने भक्तजनदेखि ऐतिहासिक महत्व बोकेको स्थलको अध्ययन, सुुगन्ध कोकिला, टिमुर, बेसार खेतीको अध्ययन, अवलोकन गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको उहा“ले बताउनुुभयो। बेसार, टिमुर, मालागेडी (सुुगन्ध कोकिला) दूधदहीको व्यापार पनि फष्टाउदै जा“दा स्थानीयहरुको आम्दानीको स्रोत पनि बढ्दै गइरहेको उहा“को भनाइ छ।
सडक विस्तारले गाउ“मा नया“ मान्छेको घुुइ“चो र दही दूध, बेसार, टिमुरको व्यापार मात्रै नभई दुःख बिरामी ह“ुदा आ“गनमै एम्बुलेन्स ल्याउने लैजान सजिलो भएको उहा“ले बताउनुुभयो।
‘नियमित गाडी नचले पनि अप्ठेरो पर्दा गाडी रिजर्व र अटोसम्म आउने गरेका छन्’– उहाले भन्नुुभयो।
बाटो आयो अब मोटर पनि आउछ कि ?
सडक आउ“दा मात्रै हामी यति खुशी छौं। अझ त्यसमा मोटर चढेर हि“डन पायौं भने कति खुशी हुन्थ्यो। सडक खुलेको चार÷पा“च वर्ष पुुग्नै लाग्यो अझै मोटर नचल्दा मोटर चल्ने बाटोमा खुुट्टा घिसार्नुु परिरहेको स्थानीय पूर्ण पुनले बताउनुुभयो। दूधरास–छिल्लीकोट–रोल्पा होलेरी जोड्ने सोनापुर सिमेन्ट खानी पहुु“च मार्ग निर्माण २०७०÷७१ बाट शुुरु गरिएको हो। दूधरासदेखि रोल्पाको होलेरीसम्म ३१ किलोमिटर सडक पर्दछ। जसमध्ये दुधरासदेखि सक्रामसम्म करिब चार किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने तयारीमा छ। तर उक्त सडकमा अझै सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन। दूधरासदेखि सक्राम छिल्लीकोट ह“ुदै रोल्पाको होलेरीसम्म सडक विस्तारको काम सकिए पनि यातायात सेवा सञ्चालन हुुन नसक्दा स्थानीयहरु अझै पैदल र अटोरिक्साको भरमामहंगो भाडा र कष्ट व्यहोर्नु परिरहेको छ।
छिल्लीकोटमा स्थानीय पूर्ण पुनले भन्नुुभयो– ‘ह“ुदै नहुनुु भन्दा सडक आयो हामीलाई यसैमा खुुुशी छ। अझ सार्वजनिक सवारी साधन चल्न सके अति राम्रो हुन्थ्यो।’ सार्वजनिक यातायात सेवा नियमित सञ्चालन हुन सके यातायात सेवाका लागि महंगो शुल्क व्यहोर्नु पर्ने वाध्यता हटेर जाने उहा“को भनाइ छ।
‘छिल्लीकोट आउनेहरु मोटरसाइकल वा आफ्नै गाडी लिएर आउछन्। कही जान परे हामीले उनीहरुस“गै सहयोग माग्छौं। कसैले लग्छन्। कसैले लग्दैनन् । यही बाध्यता भोगिरहेका छौं। हामी चढ्न नपाए पनि हेरेर चित्त बुुझाउछौं।’– उहाले भन्नुभयो ।
छिल्लीकोटमा छिट्टै यातायात सेवा
दाङको ऐतिहासिक पर्यटकीयस्थल छिल्लीकोट पर्यटकीय गन्तव्यको एक केन्द्र रहेकाले त्यसको विकास र प्रवद्र्धनका लागि यातायात सेवा अतिआवश्यक रहेकाले छिल्लीकोटमा छिट्टै यातायात सेवा सञ्चालन गरिने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताउनुुभयो। नगरका १९ वटै वडाका गाउ“–गाउ“मा यातायात सेवा विस्तारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै सरकारले सडक पूूर्वाधार योजना निर्माणका लागि तदारुकता देखाइरहेकाले छिल्लीकोटमा सडक विस्तार र स्तरोन्नतिको काम भइरहेकाले निजी क्षेत्रस“ग आपसी समन्वय गरी यातायात सेवा सञ्चालन गरिने बताउनुुभयो। उहा“ले भन्नुुभयो–
‘तत्काल छिल्लीकोटमा यातायात सेवा सञ्चालन गरिनेछ। जसले नगरस“ग सहज सेवाको विस्तार गर्नेछ। छिल्लीकोटमा आर्थिक समृद्धिको आधार मजबुत बनाउ“दै लैजानेछ।’
सडक विस्तारमा रकम अभाव
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ को दूधरासदेखि रोल्पाको होलेरीसम्म ३१ किलोमिटर सडकको ट्याक विस्तारको काम सकिए पनि थप कामको लागि रकम अभाव ह“ुदा छिटो छरितो काम सम्पन्न गर्न अप्ठेरो परिरहेको सडक डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ। कार्यालयकी इञ्जिनियर क्षितिज पोख्रेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उक्त सडकका लागि दुुई करोड रुपैया“ बिनियोजन भए पनि करीव एक करोड रुपैया“को काम सम्पन्न हुने तयारी भए पनि करीव ७५ लाखको नयँ कामका लागि सम्झौता भर्खर सम्पन्न भई निर्माणको तयारीमा रहेको छ। उक्त सडकको लागि एकमुष्ट दुुई करोड रुपैया“ विनियोजन भएको थियो।
Previous: दमकलबिहीन दाङका सात स्थानीय सरकार
Next: कहाँ छ गरिवलाई न्याय ?